Isticmaalka Enfuvirtide ee HIV, qaadashada, waxyeelada iyo digniinta - Kiimikada Shangke
Isticmaalka Enfuvirtide ee HIV, qiyaasta daawada, saamaynta dhinaca & digniinta
1. Waa maxay Enfuvirtide?
2. Qaab dhismeedka Enfuvirtide?
3. Isticmaalka Enfuvirtide ee HIV
4. Sidee loo isticmaalaa budada enfuvirtide?
5. Qiyaasta Enfuvirtide?
6. Waa maxay saamaynaha dhinaca enfuvirtide?
7. Sidee ayaa loo keydiyaa budada 'Enfuvirtide'?
8. Baadhis dheeraad ah iyo codsi ku saabsan budada Enfuvirtide
Enfuvirtide (159519-65-0) waa nooc peptide ah oo loo isticmaalo adduunka caafimaadka si looga hortago fayraska iska-difaacidda aadanaha (HIV) inuu ku faafo unugyadaada caafimaadka ah taas oo kor u qaadi karta saameynta cudurku ku yeelan karo jirkaaga. Enfuvirtide ama T-20 waxaa lagu iibiyaa meelo kala duwan oo adduunka ah oo hoos yimaada magaca loo yaqaan 'Fuzeon'. Si kastaba ha noqotee, waxay kuxirantahay halka aad ka timid, waxaad ka heli kartaa enfuvirtide-ka iibinaya magac kale oo nooc ah, laakiin dhammaantood waxay u adeegayaan isku ujeeddo.
Budada Enfuvirtide (159519-65-0) waxaa loo adeegsadaa dawooyinka kale si loo daweeyo HIV, oo ah fayras ka masuul ah helitaanka cudurka (immunodeficiency syndrome) (AIDS). Waa inaad sidoo kale la socotaa in Enfuvirtide ma daaweyso HIV, laakiin waxay kaa caawineysaa yareynta saameynta iyo saameynta jirkaaga. Dadka qaadanaya sheygan waxay ku noolaadaan nolol wanaagsan oo caafimaad leh maadaama unugyadooda laga difaacayo fayraska. Marka loo eego daraasadaha, HIV waa fayras ku dhaca unugyada cad ee jirkaaga ka masuulka ah la dagaalanka cudurada. Taasi waa sababta, marar badan, bukaannada HIV / AIDS waxay la kulmaan heerar difaac hoose. Si kastaba ha noqotee, Enfuvirtide waxay kaa caawineysaa kahortaga unugyadaada caafimaadka wixii dhaawac ah, sidaas darteed waxay kor ugu qaadeysaa xaaladaada caafimaad.
Enfuvirtide acetate waxay yareysaa xaddiga HIV ee jirkaaga ku jira, taasoo gacan ka geysaneysa kobcinta habka difaaca jirkaaga. Wax soo saarku wuxuu kaa caawinayaa inaad hoos u dhigto fursadaha aad ku qaadi karto dhibaatooyinka HIV sida caabuqyada badanaa weerara bukaanka HIV. Sida aad u qaadaneyso dawooyinka kale ee HIV / AIDS, waa fikrad fiican markasta in lala raaco Enfuvirtide maxaa yeelay waxay ka caawineysaa dawada in ay sifiican ushaqeyso una wanaajiso waxtarkooda.
Enfuvirtide waxaa lagu heli karaa aagag kaladuwan laakiin waa in lagu iibiyaa warqad dhakhtar qoro. Sidaa darteed, ka hor intaadan bilaabin qaadashada sheygan, hubi inaad tagto baaritaan caafimaad, oo aad ka hesho qiyaasta saxda ah dhakhtarkaaga. Enfuvirtide acetate ayaa laga heli karaa khadka tooska ah, waxaadna ka dalban kartaa amarkaaga raaxada gurigaaga ama xafiiskaaga. Si kastaba ha noqotee, samee daraasad sax ah si aad u fahanto soo-saaraha iyo alaab-qeybiye ka hor intaadan amarkaaga sameyn. Qiimaha enfuvirtide wuu kala duwanaan karaa iyadoo ku xiran iibiyaha. Waxaa jira walxo badan oo dawooyin been abuur ah oo suuqa yaala kuwaas oo uga sii dari kara xaaladaada. Haddii aadan hubin halka aad ka qaadanayso dawada, kala hadal dhakhtarkaaga caawimaad dheeraad ah.
2. Farshaxanka Enfuvirtide?
Sida hore loo soo sheegay, Cirbadda Enfuvirtide waa daawo loo isticmaalo daaweynta fayruuska difaaca jirka aadanaha (HIV). Fayrasku ma korayo ama ma dhaliyo kaligiis, sidaa darteedna, wuxuu ku dhacaa unugyada jirka si ay u isticmaalaan dheef-shiid kiimikaadkooda. HIV wuxuu inta badan weeraraa unugyadaada difaaca jirka ee loo yaqaan CD4 T-caawi lymphocytes ama unugyada dhiiga cad. Unugyadu waxay ku shaqeeyaan iyagoo la dagaallamaya wixii cudur ah, iyagoo isku dayaya inay galaan nidaamkaaga jirka. Inta lagu gudajiro samaynta taranka, HIV wuxuu dilaa unugyada T4-ka CDXNUMX, sidaa darteedna, jirkaagu wuu daciif noqonayaa, taasoo ka dhigaysa mid aan awoodin inuu la dagaallamo cudur kasta oo ku xiga. Taasi waxay ka dhigan tahay inuu kugu qaadsiin doono cudurada badankood ee aad ku faafi doonto maaddaama jirkaagu uusan la dagaallami karin.
Qaabka waxqabadka Enfuvirtide wuxuu hubiyaa in unugyadaada CD4 ay ka badbaadaan duulaanka HIV. Shaygu wuxuu ku xiran yahay borotiinka ku xeeran fayraska, kaas oo ka caawiya inay isku dhejiso unugyada CD4. Mar haddii enfuvirtide-ku ku dhegan yahay borotiinadan, waxay ka hortagaysaa HIV inuu la kulmo xuubka unugyadaada CD4. Xusuusnow in, HIV kaliya uu wax ka badali karo oo uu kordhi karo marka maaddada hidda-wadeedu gasho unugyadaada CD4. Sidaa darteed, enfuvirtide waxay sidoo kale hubineysaa in fayrasku uusan soo tarmin oo uu tiro ahaan ugu badin.
Tani Farshaxanka Enfuvirtide wuu ka duwan yahay dhammaan dawooyinka kale ee ka hortagga HIV-ga ee suuqa, kuwaas oo la dagaallamaya fayraska ka dib markay qaadsiiyaan unugyadaada CD4. Enfuvirtide HIV waa, sidaas darteed, waa mid ka mid ah daawooyinka anti-HIV-ga ugu awoodda badan waxaana loo isticmaali karaa in lagula dagaallamo kobaca fayraska markii ay noqotay mid u adkaysata daawooyinka kale. Si kastaba ha noqotee, wali waad qaadan kartaa keli keli Enfuvirtide ama waxaad ka dhigi kartaa doorashadaada koowaad, waxayna kuu soo bandhigi doontaa natiijooyinka aad doonayso. Ilaa hada, ma jiro daawo loo yaqaan HIV, laakiin iyadoo la adeegsado daawada loo yaqaan 'Enfuvirtide', waxaad hubin kartaa inaad hoos u dhigto xaddiga fayraska ee jirkaaga isla markaana aad hoos u dhigto cudurka kasta ee ka dhasha jeermiga HIV / AIDS.
Khubaradu waxay kugula talinayaan inaad qaadatid budada loo yaqaan 'Enfuvirtide budada' oo ay weheliso dawooyinka kale ee ka hortagga HIV ee siyaabo kaladuwan u weerara fayraska. Ku darista budada peptide daaweynta hadda jirta waxay noqon kartaa fikrad weyn, gaar ahaan haddii infekshinku u noqday mid iska caabbiya daawooyinka. Badeecadan ayaa la sheegay inay ka mid tahay dawooyinka ugu awooda badan ee ladagaallanka HIV, waxaana loo qoray inta badan bukaanada qaadanayay dawooyinka kale iyagoon wax horumar ah la soo qaadin. Waxaa kale oo loo soo bandhigi karaa dadka u dulqaadanaya dawooyinka kale ee la-dagaallanka HIV.
Fuzeon waxaa ku jira budada loo yaqaan 'Enfuvirtide budada' oo ah maadada firfircoon, taas oo ka dhigaysa dawo fiican oo lagula dagaallamo HIV jirkaaga. Fuzeon wuxuu ka tirsan yahay noocyo daawooyin ah oo loo yaqaan 'incion inhibitor'. Xeryahooda dawooyinka ee kooxdan sida Fuzeon, waxay ka horjoogsadaan fayraska HIV inuu ka hor tago unugyada CD4 oo aakhirka ka horjoogsadaan inay sameeyaan oo tirada sii bataan. Budada loo yaqaan 'peptide budada' waxaa loo isticmaalaa dawooyinka kale ee lidka-HIV-ga si loo helo natiijooyin wanaagsan. Sida aan kor ku soo sheegnay, enfuvirtide waxay ku shaqeysaa iyadoo la waafajinayo borotiinnada taas oo u sahleysa HIV-ga inuu la jiifo CD4.
Tallaabadani waxay suurtogal ka dhigaysaa suurtagal in fayrasku galo unugyada dhiigga cad oo uu wax yeeleeyo nidaamkaaga difaaca. Xaaladaha badankood, enfuvirtide acetate waxaa loo qoraa dadka qaadanayay dawooyin kale, fayruuskuna wuxuu noqday mid u adkaysanaya dawooyinka kale ee loo qoro. Kala hadal dhakhtarkaaga wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan sida si hufan loo qaato badeecadan.
Kahor intaadan bilaabin qaadashada dawadan, hubi inaad aqriso tilmaamaha adeegsiga soosaaraha enfuvirtide ee ku jira xirmadan dhexdeeda. Tilmaamaha ayaa ku siin doona macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida loo maareeyo sheyga. Qaar Alaab-qeybiyeyaasha Enfuvirtide xitaa wuxuu ku siin doonaa qaar ka mid ah waxyeelooyinka enfuvirtide si aad u ogaato goorta aad la xiriireyso dhaqtarkaaga. Waxay sidoo kale ku siin doonaan digniino enfuvirtide ah si aad amaan u ahaato markii aad qaadaneyso maaddada.
Enfuvirtide waa badeecad la isku duro, oo ka duwan daawooyinka kale ee looga hortago HIV-ga oo afka laga qaato. Budada loo yaqaan 'peptide buddani' waxay leedahay molecule waaweyn oo laga yaabo inay ku burburaan nidaamka jirkaaga markii afka laga qaato oo ay ku guuldareystaan ​​inay soo bandhigaan natiijooyinka la rabay. Wixii loogu talagalay budada peptide, hubi inaad hesho diyaargarowga si sax ah ama u oggolow dhaqtarkaaga inuu kuu sameeyo. Si kastaba ha noqotee, takhtarkaagu wuxuu kugu tababari karaa sida loo diyaariyo budada enfuvirtide-ka ah dareeraha ka hor intaadan qaadin cirbadda enfuvirtide.
Raac dhammaan tallaabada diyaarinta si taxaddar leh markaad diyaarinayso budada enfuvirtide. Budada waa in lagu qasiyaa biyo jeermis dilaa oo si waadax ah loo baaro xalka si loo hubiyo in xalka si buuxda isugu qasan ka hor intaadan durkin.
Ku bilow adoo ka saaraya daboolka daboolka ka qaadanaya qiyaasta biyaha nadiifka ah ee duritaanka mudista.
Si tartiib ah u tirtir fiyaal kasta oo ku dhaji kuleylka aalkolada leh ka dibna u daa xoogaa xoogaa ah ilaa dushooda ay ku qallajiso.
Adeegso irbadda 3ML weyn oo jiid weelka tuubada dib ugu noqo ilaa 1ml calaamad, ka dibna hawada si tartiib tartiib ah ugu dhex geli weelka biyaha nadiifka ah.
Hadda geli irbadda irbadaha lagu duro jeermiska weelka furiinka xarunta dhexe ee jikada.
Saliingaha geli weel biyo nadiif ah galka Fuzeon xagal.
Marka xigta mari biyo nadiif ah, oo hubi in ay si tartiib tartiib ah ugu daadato budada Fuzeon.
Ha ruxin weelka laakiin u isticmaal fartaada taabashada illaa 10 sekan si uu u milmo.
Marka ay bilaabato in ay kala dirto, dhinac dhig si aad u baabi'iso gabi ahaanba kaas oo qaadan kara ilaa 45 daqiiqo.
Marka gebi ahaanba la isku daro, xalka waa inuu noqdaa midab la'aan, cad yahay, oo aan laheyn wax xumbo ah, haddii xalka la jeesto, sii waqti badan si uu u milmo kahor intaadan is durkin. Marka xalka uu xalliyo oo ay caddaato waxaad hadda maamuli kartaa qiyaasta. Ha qaadan qiyaasta daawada haddii aad aragto walxaha qaarkood ama ka hor inta aan xalka si buuxda loo nadiifin.
Qiyaasta caadiga ah ee dadka waaweyn waa 90ml maalin kasta oo ay tahay in la qaato laba jeer maalintii. Cirbadda waa in lagu duraa gacantaada kore ama qaybta sare ee bowdadaada. Haddii aad badeecada siineysid cunugga, takhtarkaaga ayaa kuu sheegi doona qiyaasta saxda ah iyo sida badan ee loo isticmaalo duriinka. Waxaa lagugula talinayaa inaad wareejiso aagga duritaanka si aad u siiso waqti ay ku bogsadaan. Sidoo kale, u sheeg dhaqtarkaaga haddii aad qaadatid dawooyin kale oo cudur ah ka hor intaadan bilaabin qaadashada daawada (Enfuvirtide).
Enfuvirtide waa in uu qaadaa bukaan kasta oo qaba HIV / AIDS si kor loogu qaado nidaamka difaaca maadama uu ka horjoogsanayo fayrasku inuu la jaan qaado unugyada CD4 iyo sidoo kale looga hor istaago inay soo baxaan. Qiyaasta daawada, si kastaba ha noqotee, way ku kala duwan tahay carruurta iyo dadka waaweyn. Isku-darka Enfuvirtide wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa la dagaallanka fayraska HIV ee sameeyay caabbinta daawooyinka kale ee ka hortagga HIV.
Qiyaasta lagu taliyay
Qiyaasta lagu talinayo ee dadka waaweyn ee daawada loo yaqaan 'Enfuvirtide' ee HIV waa 90mg maalintii oo loo qaybiyo laba qaadasho. Waa inaad ku muddaa duritaanka inkasta oo bowdada dusheeda, gacanta kore ama caloosha.
Qiyaasta carruurta ee 6 illaa 16 sano jir, waa 2mgggkiiba kiiloogaraam, iyo qiyaasta waa in la siiyaa laba jeer maalintii. Qiyaasta ugu badan ee carruurta ku jirta daroogadaani waa 90mg maalin kasta. Ilmaha jira 17 sano iyo wixii ka sareeya qiyaasta lagu taliyay waa 90 mg maalin kasta waana in sidoo kale loo qaybiyaa laba qiyaasood maalin kasta.
Qiyaasta daawada Enfuvirtide ma seegtay?
Haddii ay dhacdo inaad ilowdid qaadashada daawadaada loo yaqaan 'Enfuvirtide HIV', isla markiiba qaad, waad xasuusataa. Si kastaba ha noqotee, waad ka boodin kartaa qiyaasta haddii ay ku dhowdahay waqtiga qiyaasta soo socota. Ha u isticmaalin qadar dheeri ah si aad ugu buuxiso midka la il daran; waxay u horseedi kartaa waxyeelo daran. Sidoo kale, xasuuso inaad heshid dawadaada ku xigta waqtiga ka hor intaysan dhakhtar kuu qorin.
Qiyaasta Enfuvirtide qaadashada?
Haddii ay dhacdo inaad wax xad dhaaf ah ah raadsato daryeel caafimaad isla markaaba waxay kuu horseedi kartaa waxyeelo daran.
Markaad qaadaneyso daawada loo yaqaan 'Enfuvirtide acetate' ha ku darin agagaarka jilibkaaga, xusulkaaga, xuddunta ama barida. Sidoo kale iska ilaali inaad ku durto qiyaasta nabarrada, burooyinka, nabarada ama wax kasta oo maqaarka ah oo aan caafimaad qabin. Qaadashada daawada loo yaqaan 'Enfuvirtide' kama hor istaagayso faafitaanka cudurka, sidaa daraadeed marwalba galmo la ilaaliyo, iska ilaali inaad la wadaagto waxyaabo fiiqan iyo cadaygaaga. La soco dhammaan tilmaamaha qiyaasta qaadashada si aad ugu raaxaysato faa'iidooyinka ugu badan. Wixii macluumaad dheeraad ah, kala hadal dhakhtarkaaga si uu kuugu hago siyaabo kala duwan oo looga hortago isu gudbinta HIV.
Enfuvirtide HIV-ga sida dawooyinka kale oo dhami waxay sidoo kale kuu geyn karaan waxyeelo kaladuwan iyada oo ku xidhan sida dawadu uga falcelinayso nidaamka jirkaaga. Mararka qaarkood waxyeellooyinka daawada enfuvirtide waxaa sabab u ah xad-dhaafka ama si xun u isticmaalka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaar ka mid ah waxyeelooyinka ay caadi u yihiin ku dhawaad ​​dhammaan isticmaaleyaasha enfuvirtide. Kaydinta enfuvirtide oo liidata waxay sidoo kale kuu horseedi kartaa waxyeelo daran. Qaar ka mid ah wax caadi ah Waxyeellooyinka dawooyinka ee Enfuvirtide waxaa ka mid ah;
Cunno cunno, lallabbo, shuban iyo calool-fadhi
Xanuun, barar ama cuncun meelaha la muday
Tabar darrida muruqyada iyo xanuun
La xiriir dhaqtarkaaga isla marka aad la kulanto dhibaatooyinka soo socda ee daran;
Barar ku dhaca luquntaada ama cunahaaga, awood la'aan ama isbeddelo caadada ah
Calaamadaha caabuq cusub sida qanjirada oo barara, miyir-qabasho ama nabarro qabow.
Waxyeelooyinka enfuvirtide-ka way ku kala duwanaan karaan qof ilaa qof kale sidaa darteedna ha u qaadanin wax bilaash ah. U sheeg takhtarkaaga haddii ay waxyeellooyinka caadiga ahi iska dhammaadaan waqti ka dib. Si aad amaan u ahaato markaad qaadaneyso sheygan, fiirso dhammaan tilmaamaha qiyaasta daawada ee uu bixiyo dhaqtarkaagu.
7. Sidee ayaa loo kaydin karaa budada 'Enfuvirtide'?
Budada Enfuvirtide (159519-65-0) soosaarayaasha markasta waxay muujiyaan sida ay tahay inaad u keydiso badeecada markaad isticmaaleyso iyo xitaa sida loo tuuri karo. Budada kaydinta budada ee loo yaqaan 'Enfuvirtide' ee aan la miirbixin karin waa heerkulka qolka qiyaastii 20 illaa 25 digrii Celsius. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan awoodin inaad ku kaydiso heerkulka qolka, waxaad ku hayn kartaa qaboojiye illaa 2 illaa 8 digrii Celsius. Sidoo kale, ku keydi biyaha nadiifka ah heerkulka qolka marwalba.
Markaad isku qasdid xalka enfuvirtide-ka ku kaydi qaboojiyaha 2 illaa 8 darajo Celsius. Isku qas enfuvirtide xal waa in lagu qaataa 24 saacadood gudahood. Ha u isticmaalin sheyga ka dib markay dhaceyso sidoo kale ha iibsan marka shaabadaysan xirmada ama jabto. Ka dib markaad isticmaasho budada enfuvirtide, raac tilmaamaha FDA ee ku saabsan sida aad u daadiso qalabka iyo dawooyinka aan la isticmaalin.
Markii aad ka iibsanayso budada 'enfuvirtide' alaab-qeybiyeyaal kala duwan, hubso inaad sameyso cilmi-baaris sax ah si aad u hubiso inaad hesho badeecad tayo leh oo kuu ballan-qaadi doonta natiijooyin cajiib ah. In kasta oo magaca astaanta 'enfuvirtide Fuzeon' uu yahay sumadda caanka ah ee suuqa, haddana waxaad sidoo kale ka heli kartaa badeecada lagu iibinayo iyada oo lagu iibinayo magac kale oo shirkadeed. Waxaa jira alaabooyin badan oo iibiya enfuvirtide suuqa, waana inaad had iyo jeer u fiicnaataa sida ugu fiican. The Qiimaha Enfuvirtide way kala duwanaan karaan hal iibgeeye mid kale, ha u isticmaalin inay tahay qodob muhiim ah markaad dooraneyso iibiyaha saxda ah.
Isku soo wada duuboo, waxaa loo baahan yahay daraasado caafimaad oo dheeri ah iyo cilmi baaris si loo go'aamiyo adeegsiga kale ee loo yaqaan 'enfuvirtide' iyo codsigiisa. Maaddaama ay tahay wax soo saar joogto ah, isticmaaleyaal badan ayaa soo saaray walaacyo, iyo daraasado dheeraad ah ayaa kaa caawin kara sameynta qiyaasta afka laga qaato. Haddii kale, maaddada ayaa loo sii horumarin karaa si loogu duri karo hal jeer ama laba jeer bil kasta. Waqtigaan la joogo, daawada loo yaqaan 'Enfuvirtide' weli waa daawo la iska duri karo oo la taaban karo. Xor baad u tahay inaad kala hadasho dhakhtarkaaga wax ku saabsan enfuvirtide iyo gp41.
Zhu, X., Zhu, Y., Ye, S., Wang, Q., Xu, W., Su, S.,… & Zhang, T. (2015). Hagaajinta guryaha dawooyinka iyo qaabdhismeedka qaabdhismeedka wajiga HIV ee ka hortaga enfuvirtide: muujinta faa'iidooyinka istiraatiijiyadda peptide artifishaalka ah. Warbixinno cilmiyeysan, 5, 13028.
Blanco, JL, & Martinez-Picado, J. (2012). HIV wuxuu isku daraa horjoogsadayaasha bukaannada qibrada leh ee ART. Fikradda hada ee HIV iyo AIDS, 7(5), 415-421.
Chowdhury, S., & Roy, PK (2016). Qaabaynta xisaabta ee enfuvirtide iyo horjoogsadayaasha ilaalinta sida daaweynta isku dhafka ah ee HIV. Saxafiga Caalamiga ah ee Sayniska aan tooska ahayn iyo Shareecada, 17(6), 259-275.
Macluumaadka muhiimka ah ee daawada leuprorelin acetate side effects, qiyaasta
Koyste lohodku miyuu kordhin karaa shaqada lab?